Soo Bixidda Ilkaha Caruurta Iyo Daryeelka Ay U Baahan Yihiin iyo calama dahoda | Wararka Dalka Iyo Dibada
Soo Bixidda Ilkaha Caruurta Iyo Daryeelka Ay U Baahan Yihiin iyo calama dahoda
Aug 13, 2018 - jawaab
Korniinka iyo aasaaska ilkuhu waxay ilmaha u bilowdaan inta uu ku jiro uurka. Inta badan caruurta ilkaha ugu horreeya ee loo yaqaan “ilko-caanoodka” waxay usoo baxaan inta u dhexeysa 3 ilaa 7- bilood. Mar mar dhif ah waxaa la arkaa ilmo ku dhasha iyagoo leh hal ama labo ilig, qaar kale oo ilmaha ka mid ahna asbuucyo kadiba ilkaha ugu horreeya ayaa usoo baxa.
Ilkaha caruurta waxaa ugu soo hor baxa foolasha yar yar ee hoose, waxaa dhici karta inay ugu soo baxaan saddexda bilood ee ugu horreysa. Hal bil ama labo bilood kadibna waxaa kusoo xigsada foolasha sare iyo miciyaha Qiyaas ahaan hal bil kadibna waxaa usoo baxa miciyaha hoose. Ugu dambeynna waxaa usoo baxa gowsaha, waxay badanaa soo baxaan marka ilmuhu uu 3 sano jir noqdo. 20 Ilig ayuu yeeshaa xilligaas.
Maxay Yihiin Calaamadaha ay caruurtu dareemaan marka ilkuhu usoo baxayaan?
Waa kuwaan calaamadaha marka ilkuhu ilmaha usoo baxayaan:
Dhareer ( Caygu ama dhareerku waxa uu wajiga u yeelaa faruurac)
Cunagga oo jeclaysto inuu wax qaniino sida gacmaha iwm
Cunugga oo cuntada diida.
Dhibaatooyin dhinaca hurdada ah.
Soo bixidda ilkahu waxaa la socda qandho, matag ama shuban .
Daryeelka soo bixidda ilkaha caruurta:
Sii wax uu uu calaliyo: Waxaad siin kartaa caagga loo yaqaan teething ring, ama maro nadiif ah.
Sii cunto qabow: sida caano garoor (yogurt). Cuntada qabow waxay ka yareyn kartaa xanuunka soo bixidda ilkaha.
U daliig cirridka: Fartaada oo nadiif ah si tartiib ah ugu daliig cirridkiisa.
Sidee ilkaha loogu nadiifiyaa caruurta:
Marka ilkuhu ilmaha usoo baxaan u caday labo goor maalin kasta adigoo isticmaalaya cadayga caruurta iyo inyar oo dawada ilkaha lagu cadaysado ah. kalana tasho dhakhtarka ilmaha. Waa inaan ilmuhu liqin daawada ilkaha Maadada falooraydh oo daawada ilkaha ku badani waxay keeni kartaa waxyeello caafimaad. marka u 2 sano gaarana uu kordhi dawada ilkaha lagu cadaysado.
Goorma ayay bilaabataa in ilkuhu ka dhacaan caruurta?
Inkastoo caruurtu ay kala duwanaan karaan hadana inta badan waxay ku bilaabataa marka ilmuhu uu gaaro da’da 6 ilaa 7 sano.